सबल र सक्षमतातर्फ उन्मुख वाणिज्य बैंक
आर्थिक वर्ष २०७४/७५को अन्त्यसम्ममा २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २४ बैंकहरूले हकप्रद, बोनस, मर्ज वा प्राप्ति मार्फत तोकिएको पुँजी पु¥याएका छन् । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), कुमारी र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल (एनसीसी) पुँजी व्यवस्थापनको प्रकृयामा छन् । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको अन्योल चिर्दै व्यवसाय विस्तार र मुनाफामा वृद्धि गर्न सफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
शुक्रवार, भदौ ८, २०७५
मिडियाले कम आकलन गरेकै हो त ?
स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि धेरै देशमा एउटा सामान पाठ्यवस्तु समावेश गरिएको छ ।
युवाशक्ति उपयोग : समृद्धि आधार
वर्तमान सन्दर्भमा दैनिक रूपमा करिब १ हजार नेपाली युवा कामकै लागि बिदेसिन्छन् । छिमेकी देश भारतमा कामकै लागि १५ सयभन्दा बढी युवा बिदेसिन्छन् । युवाहरू चाहेर पनि देशमा सम्भावनालाई नियाल्न सक्दैनन् । बेरोजगारीको पर्दापछाडिको असर आपराधिक गतिविधि बढ्दो जोखिम हो ।
धनी रोल्पा !
रोल्पा जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशमै सबैभन्दा कम गरिब घरधुरीको जिल्लामा परेको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या २ लाख १२ हजार ९ सय २९ मध्ये ३४ हजार ७ सय ६२ अति गरिबको सूचीमा सूचीकृत छन् भने २० हजार ८ सय ६६ मध्यम गरिबमा छन् । १३ हजार ९ सय १० सामान्य गरिबका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । तीनै थरीका गरिबको संख्या जोड्दा जिल्लामा कुल गरिबको संख्या ६९ हजार ५ सय ३८ देखिएको छ; अर्थात् गरिबी दर ३२.७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
सिचाँइ आयोजना : कृषिक्षेत्रको मेरुदण्डको आधार
कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जल अर्थात् सिँचाइ अमृतसमान हुन्छ । परन्तु, कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि यथेष्ट सिँचाइ सुविधाको अभावमा विद्यमान कृषियोग्य भूमिबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन । अहिले पनि कृषियोग्य भूमिको ठूलो हिस्सा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ । त्यसैले ६५ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेसा भईकन पनि वार्षिक करिब डेड खर्बको कृषि वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा शोधभर्ना प्राप्तिको प्रभावकारिता
सेवाप्रवाह र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यता पर्छ । राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण सरकारी वित्तका प्रमुख स्रोत हुन् । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता स्वदेशी वचत तथा लगानीबीचको खाडल पूरा गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न परिचालन गरिन्छ ।
नेपालमा खाना पकाउने ग्यास कारोबारको समस्या
भान्छामा प्रयोग गरिने इन्धनदेखि औद्योगिक र सवारी साधन वा अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत एलपीजी ग्यासको प्रयोग हुन्छ । एलपीजी प्राकृतिक रूपमा रङ र गन्धविहीन हुन्छ, यो ग्यासमा विशेषतः मक्र्याप्सन नामक रसायनको सम्मिश्रण गरिएको हुन्छ, यही रसायनका कारण ग्यासबाट गन्ध आउने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रसायनको मिश्रणले मानिस, जीव र जनावर कसैलाई पनि कुनै हानि गर्दैन भनेर दाबी गरेको छ ।
कर आतंक : पुनर्विचार गर्न जरुरी
आयस्रोत नबढ्दै र बेरोजगारी नघट्दै आमजनताको दैनिकीमा परेको तीव्र कर वृद्धिको चापले— सरकारप्रति वितृष्णा त बढेको छ नै, यसले वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि बीजारोपण गरेको आभाससमेत दिँदैछ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहर कि आवश्यकता ?
एकपटक फेरि विकास–निर्माणले गर्ने वातावरण प्रभावको बहस सतहमा आएको छ । सरोकारवाला र एभिएसनसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले बहुप्रतीक्षा गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कतै अन्योलमै पर्ने त होइन ? विकास–निर्माणले वातावरणमा पर्ने प्रभाव सानो या ठूलो जे पनि रहन सक्छ, त्यो तपाईं–हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत वर्ष सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनको परिणामपछि आमनागरिकमा एक किसिमको आशा पलाएको थियो । त्यसका पछाडि खास कारण थियो— केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै पार्टीको सबल बहुमत । निर्वाचनताका दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहेका एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी निर्माण भएपछि त्यसको प्रभाव चुनावी नतिजामा देखिनु स्वाभाविक पनि हो ।
लघुवित्त क्षेत्र र उत्तरदायी वित्तीय सेवा
सन् १९७० मा अमेरिकाबाट सुरु भएको उत्तरदायी वित्तीय सेवाको प्रारम्भिक अवधारणाले २००२ देखि व्यापकता पाउँदै २०१५ देखि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आएको पाइन्छ । वित्तीय सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरू अत्यधिक नाफामुखी हुँदा ग्राहकको शोषण भएको र सेवाप्रवाह गुणस्तरहीन भएको गुनासो विश्वव्यापी रूपमा बढ्न थालेपश्चात् ‘उत्तरदायी वित्तीय सेवा’ को अवधारणाको विकास तथा विश्वव्यापी प्रयोग हुन लागेको हो ।
कर मात्रै राज्य सञ्चालनको स्रोत होइन
बारीको रूख काट्दा कर, व्यवसाय चलेन बन्द गर्न कर, मकै पोले कर, खोलाको पुल पार गर्न कर, डोकोमा साग डुलाए कर, बच्चाको जन्मदर्ता होस् वा मानिसको मृत्यु प्रमाणित गर्दा होस् कर ।
कानुनका जटिलता र नयाँ ऐनको विरोध
कानुनको उद्देश्य दोषीलाई दण्ड–सजाय दिई समाजलाई न्यायिक बाटोमा डोराउने हो । के काम गर्नेलाई दोषी या अपराधी मान्ने र कतिसम्म सजाय दिने भन्ने विषय एकदमै जटिल र अप्ठेरो विषय हो ।
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र यसको अवस्था
सरकारले निर्यातोन्मुख सातवटा प्रदेशमा प्रत्येकमा दुई–दुईवटा गरी चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कदमबाट देशको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सन् २०१६ मा नै सेज ऐन ल्याइसकेको छ ।
शुक्रवार, भदौ १, २०७५
प्रहरी मुठभेड : झूटो नबोलौँ, सत्य नलुकाउँ
हरेक अपराधको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक मामिलासँगै जोडिएको हुन्छ । चाहे हत्या, लुटपाट, अपहरण तथा फिरौती असुल, बैंक तथा वित्तीय अपराध होस् वा घरकलह–झैझगडा, अंशबन्डा विवाद, यस्ता संगठित, सामाजिक र सार्वजनिक अपराध जुनसुकै आवरण वा पृष्ठभूमिमा भए पनि मूल जड भनेको पैसा वा सम्पत्ति नै हो ।
पर्वत महोत्सव आजदेखि